shock Wave ကိုကုထုံး
ရင်သားကင်ဆာ LIFT ချဲ့
Pressotherapy Infrared စက်
hot ရောင်းအား4လေဟာနယ်လက်ကိုင် cryotherapy ခန္ဓာကိုယ် Slim cryolipolysis စက်အလုပ်လုပ်
မော်ဒယ်အမည်ဖြင့် Coolmax 4S
Cryolipolysis အပူချိန် -105℃℃ချိန်ညှိ
အပူအပူချိန် 40 အကွောငျး centi ဒီဂရီ
လေဟာနယ် mode ကို ကွဲပြားခြားနားသော cellulite4Modes သာ
PDT ရန်ကုန်လှိုင်းအလျား 650nm
စက်ပြရန် 10.4 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်
လက်ကိုင်ပြရန် 3.5 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 110V-120V / 220V-240V, 50 / 60Hz
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (သစ်သားသေတ္တာ) 118 * 66 * 67cm
အဆီထဲမှာ triglyceride အထူးသဖြင့်အနိမ့်သောအပူချိန်အတွက်အစိုင်အခဲအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ကြောင့်ရွေးချယ်အဆီမရှောင်သာပစ်မှတ်ထားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးထိခိုက်စေပါဘူးတဲ့ graual လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အဆီဆဲလ်တွေပပျောက်ဖို့အဆင့်မြင့်အေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အဆီဆဲလ်တွေအထူးသဖြင့် coolingtemperature ထိတွေ့နေကြတဲ့အခါသူတို့တဖြည်းဖြည်းအဆီအလွှာ၏အထူလျော့နည်းစေကြောင်းသဘာဝကဖယ်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်။ မလိုချင်တဲ့အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒါသည်အတိုင်းကုသမှုဧရိယာထဲမှာအဆီဆဲလ်တွေတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Norma ဇီဝြဖစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်နေကြသည်။
1. စက်ကိုဖွင့်ထားပါ။ ထိုအခါသင်သည်အောက်ပါကဲ့သို့အပေါ် display ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်
2.Large Cryolipolysis လက်အပိုင်းအစ: အ cryolipolysis, ဖုန်စုပ်နှင့်ဖိုတွန် Dynamic ပေါင်းစပ်။
အဆိုပါ Cool socket ထဲသို့ထည့်သွင်းဖြစ်လျှင်, လက်ျာဘက်၌မှာကိုင်ဆောင်ထားသူအပေါ် cryolipolysis လက်အပိုင်းအစကိုယူပါ။
3.Medium Cryolipolysis လက်အပိုင်းအစ: အ cryolipolysis, ဖုန်စုပ်နှင့်ဖိုတွန် Dynamic ပေါင်းစပ်။
အဆိုပါ Cool M ကို SOCKS ထဲသို့ထည့်သွင်းဖြစ်လျှင်, လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာကိုင်ဆောင်ထားသူအပေါ် cryolipolysis လက်အပိုင်းအစကိုယူပါ။
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ Cryolipolysis လက်ကိုအပိုင်းပိုင်း:
4.Suction အရေးပေါ် Stop ပြောင်းလဲမည်:
ဒါဟာအပေါငျးတို့သစုတ်ယူခြင်းလွှတ်ပေးရန်သတင်းမီဒီယာသည်လေဟာနယ် function ကိုထိနျးခြုပျဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဆိုအရေးပေါ်လျှင် (သူတို့ထို့နောက်သည်, cryolipolysis ကုသမှုစဉ်အတွင်းယူရန်သင့်လူနာမေးဖို့ပါ။ ဒါဟာအရေးပေါ်ဘား socket သို့ .Insert) အပေါငျးတို့သစုတ်ယူခြင်း torelease နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်: အဆီအေးခဲ Kryolipolyse ခန္ဓာကိုယ်စက်ပုံဖော်
နောက်တစ်ခု: နောက်ဆုံးရ Lipo အေးဆီ Slim Cryolipolysis စက်အေးခဲသော
oem Cryolipolysis စက်
အိတ်ဆောင်ဆီ Cryolipolysis RF Ultraso အေးခဲသော ...
အဆီအေးခဲ Kryolipolyse ခန္ဓာကိုယ်စက်ပုံဖော်
5 Cryo ကိုင်တွယ်နှစ်ချက်ချင်း Criolipolisis ခန္ဓာကိုယ်က S ...
Slim Cryolipo အေးခဲသောနောက်ဆုံးပေါ် Lipo အေးဆီ ...
အိတ်ဆောင် Cryo lipo Slim cryolipolysis machi ...
Mini ကိုအရွယ်အစား Cryo + M အရွယ်အစား + L ကိုအရွယ်အစား cryo လက်ကိုင် + cavi ...
နေရပ်လိပ်စာ: 2203, No.369 Zhonghua မြောက်ပိုင်းလမ်း, Handan စီးတီး, Hebei ပြည်နယ်, တရုတ်
© Copyright - 2019-2020 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
Electroporation အပ်စနစ် , Derma Rolling စနစ် , Wrinkle Removal, Nano Derma Pen, Derma Pen 3mm, ခန္ဓာကိုယ် Slim စက် ,